Mamporisika ny mpamaky ve ianao? | Martech Zone
Talata, Martsa 20, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Androany alina aho dia nahazo mailaka avy amin'ny Bounds. Misy fifaninanana ao amin'ny Gather hanoratra momba ny nanovan'ny mpampianatra ny fiainanao.
Ny bilaogy iray vao avy nandefa an'i Brian Clark an'ny CopyBlogger no aingam-panahy ho ahy, Fahadisoana 5 momba ny fitsipi-pitenenana izay mahatonga anao ho moana. Brian no nanoratra ity lahatsoratra ity, 2 herinandro lasa izay, saingy vao mainka mihasosotra ahy izany. Miady mafy amin'ny fitsipi-pitenenana sy tsipelina aho.
Momba ny fifaninanana: Mahalala mpampianatra nanao fanovana ve ianao? Ny sisintany sy ny fanangonana dia te handre ny tantaranao mba hizarantsika azy amin'ny hafa ary hankalazantsika ny asa mahafinaritra ataon'ny mpampianatra isan'andro. Ny sisintany dia hisafidy finaliste efatra handray karatra fanomezana $ 50 Border ary amin'ny mpandresy tsara vintana iray hahazo $ 250 Border Gift Card.
Mandritra ny andro dia misaintsaina izay novakiako, nianarako ary vitako aho. Eo am-pandehanako mody, matetika no manangona ireo eritreritra ireo ao an-tsaiko aho ary mandamina azy ireo hanoratra ao amin'ny bilaogiko. Amin'ny fotoana hipetrahako tena hanoratra dia efa vonona hipoaka ny atiny. Matetika aho manoratra amin'ny 'stream of fahatsiarovan-tena'. Tsy afaka mitendry haingana be aho… noho izany ny fehezanteny sy ny fehintsoratra amiko dia manjary mikorontana ary mitsambikina.
Tsy tapaka, mamela fahadisoana vitsivitsy aho. Tehiriziko ho toy ny drafitra ilay lahatsoratra. Novakiako ilay volavola. Novakiako ny porofo. Manamboatra lesoka aho ary mamerina mamoaka ny drafitra miverimberina. Farany, navoakako ilay lahatsoratra… ary manaporofo izany indray aho. Na dia mitandrina mafy aza aho dia mbola hamela ny iray amin'ireo hadisoana izay 'mahatonga ahy ho moana'.
Saingy tsy hanakana ahy tsy hanoratra izany. Laviko izany.
Ny tetikasa Gather dia nanentana ahy hanoratra momba ny mpampianatra anglisy anglisy kilasy faha-8, Ramatoa Rae-Kelly. Raha tsy maka iray na roa minitra ianao hamakiana ilay lahatsoratra dia hameno anao aho. Tamin'izay fotoana izay tamin'ny fiainako dia tsy azoko antoka loatra ny tenako ary tena nila olona iray hanome ahy antony ahazoako manaja ny tenako .
Raha tokony hifantoka amin'ny soratako, ny tsipelina ary ny fitsipi-pitenenan-dresako ratsy izy, Ramatoa Rae-Kelly kosa nitety ny asako mba hahitana izay tsara fa tsy ratsy. Tamin'ny fifantohana amin'ny zavatra tsara dia te hianatra sy hamokatra asa lehibe ho an-dRamatoa Rae-Kelly aho. Hodinihiko ny asako noho ireo lesoka natao taloha ary hiezaka mafy aho mba tsy hamerina azy ireo indray.
Ramatoa Rae-Kelly dia nahafantatra ny fomba hanomezana aingam-panahy sy fananganana fahatokisan-tena ho an'ireo mpianany. Tsy fahita izany na ho an'ny mpampianatra na ho an'ny mpitarika amin'izao vanim-potoana izao. Fantatro fa tsy nanoratra ilay lahatsoratra i Brian mba 'hahatonga ahy ho moana' fa tena nanelingelina ahy (ary na izany aza). Ny fanantenako ho anao olona izay mieritreritra ny hanao bilaogy na mitoraka bilaogy dia hoe tsy mahakivy anao ny lahatsoratra toa an'io.
FANAMARIHANA: Bilaogin'i Brian dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny Internet. Izy io dia loharano mahafinaritra ary nanampy ahy hanatsara ny fahaizako manoratra sy mandika ny fahaizako manoratra. Bilaogy mahafaly sy tsara io ary tsy ho ampiasaina hanakiviana ny mpanoratra… tena ny mifanohitra amin'izay no izy!
Tsy afaka miteny ho an'ny bilaogera rehetra aho, fa havelako ny helokao ary manantena ny hamelanao ny heloko aho. Tsy mamaky ny bilaoginao aho satria mitady ny hadisoanao - mamaky izany aho satria mianatra avy aminao na mankafy ny asa soratanao. Mandritra izany fotoana izany dia manantena aho fa hanokana fotoana hamenoana ny taratasim-pifandraisako ianao raha “moana aho”. Tsy ho sosotra mihitsy aho… ny iray amin'ireo mpamaky ahy dia tsy maintsy nanazava tamiko intelo tamin'ny mailaka iray rehefa nanoratra manoro hevitra aho fa tsy manoro hevitra (argh!).
Mino aho fa mihatsara ny fitsipi-piteniko sy ny tsipelina. Fantatro fa, ho an'ny mpamaky sasany, ny lesoka toa ireo dia mandratra ny fahatokisako tena sy ny lazany ka miezaka mafy aho hanatsara azy ireo. Manantena aho fa nanapaka kely ahy ianao ary nifantoka tamin'ny hafatra fa tsy ny lesoka!
Manitsy ny mpianany ny mpampianatra mahay, mamporisika azy ireo ny mpianatra lehibe. Azonao soloina mpitarika, mpanazatra, mompera, ray aman-dreny na bilaogera eo amin'ny toeran'ny mpampianatra ary marina izany.